WAAN IDIN OGNAHAY!: Taageerayaasha AC Milan oo kooxdooda ku eedeeyay arrin la yaab leh & saxaafadda oo wax ka qortay! + Sawirro – Gool FM
WAAN IDIN OGNAHAY!: Taageerayaasha AC Milan oo kooxdooda ku eedeeyay arrin la yaab leh & saxaafadda oo wax ka qortay! + Sawirro
Raage May 4, 2016
(Milano) 04 Maajo 2016 – Taageerayaasha AC Milan gaar ahaan kuwa Curva Sud ayaa maanta soo saaray bayaan cambaarayn ah oo ku aaddan kooxda Milan oo ay ku eedeeyeen inay tahay koox aan jid iyo jiho toona lahayn oo maamulka ka wareertay meel ay u socotana aan la aqoonin.
Taageerayaasha ayaa soo qaatay hal arrin oo cajiib ah, taasoo ah inay AC Milan durba isu diyaarinayso ka qaybgalka tartanka International Champions Cup 2016 oo bishii Jannaayo lagu dhawaaqay, waxayna Rossoneri Maraykanka kulanka ugu horreeya kula ciyaari doontaa kooxda Bayern Munich oo ku kulmi doonaan gegada Soldier Field ee Chicago, IL 27-ka Luulyo.
Taageerayaasha Milan ayaa sheegay in haddii ay lacalla Milan usoo baxdo UEFA ay xilligaasi tahay waqtigii ay dheeli lahayd isreebreeb-horaadka, sidaa darteed ay Milan si ula kac ah uga hareeyso EL si ay u dheesho tartamada xagaaga oo kaga faa’iido badan.
Yeelkeede, saxaafadda Talyaaniga ayaa qoraysa in bishii Oktoobar ee 2013, ay AC Milan heshiis la gashay tartanka ICC oo ah tartan aad loo daawado xagaaga, balse waxaa heshiiska ku jira shuruud ah in AC Milan ay tartanka ka baaqan karto haddii uu kusoo beegmo tartamada kooxdu dheesho ee rasmiga ah, waxayna Milan sanadkan ka shaqaysiin kartaa shuruudaas waase haddii ay usoo baxdo EL, waxaana arrintaas la ogaan doonaa 22-ka Maajo.
Laacibiinta kooxda Milan ayaa sheegay inay u dagaallami doonaan booska 6-aad si ay u xasiliyaan EL, iyagoo haddii ay taas waayaanna ku dadaali doona guusha Coppa Italia oo ah dariiqad kale oo ay ku iman karaan EL, waase laba dariiqadood oo aan sahlanayn.
Taageerayaasha Milan ayaa qaba inaysan suurta gal ahayn in Milan oo barbarro la gashay Roma iyo Napoli kana badisay Inter iyo Viola aysan suurtagal ahayn inay ka badin waydo 3-da kooxood ee ugu hooseeya horyaalka sida Verona, Carpi, Frosinone, iyagoo dareensan inay ula kac u sameeynayso, si aan waqti uga lumin EL.
MILAN, ITALY – FEBRUARY 24: Supporters of FC Inter Milan during the Serie A match FC Internazionale Milano and AC Milan at San Siro Stadium on February 24, 2013 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)
Zinedine Zidane oo ballan qaaday inuu xal u raadin doono saraawiisha ka jeexanta!
Real Madrid oo iska xaadirsay Final-ka Champions League…(Waa Finalkii reer Madrid)+SAWIRRO